हलियुड / बलियुड Archives »
Category: हलियुड / बलियुड
काठमाडौँ साउन ५ । बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री ‘शिल्पा शेट्टी’का पति ‘राज कुन्द्रा’ देश विदेशमा कहलिएका व्यक्ति हुन् । तर कुन्द्रा लाई भारतमा धेरैले बिजनेश म्यान भन्दा पनि शिल्वा शेट्टीको पतिका रूपमा चिन्ने गर्दछन् । उनको विजनेश विश्वभर फैलिएको छ । राज कुन्द्राले नेपालमा सल बेचेर आफ्नो व्यवसाय सुरु भएका थिए । कुन्द्रा आज एक सफल बिजनेशम्यान को रूपमा परिचित रहेका छन् । इन्टरनेटमा पाएका जानकारी अनुसार हाल उनी सँग २४०० करोड बराबरको सम्पत्ति रहेको छ । एक अन्तर्वार्तामा राज कुन्द्राले भनेका थिए,‘ आज म जुन सुख सयलको जिन्दगी बाँचिरहेको छु…
काठमाडौँ । बलिउडका सिनेमा क्षेत्रका एक सुपरस्टार हुन राजेश खन्ना । खन्ना एक कलाकार मात्र थिएनन् । उनी एक स्टार थिए जसको स्टाडम बाटै धेरै पागल बनेका थिए । राजेश खन्नाको एक झलक पाउन युवतीहरू तड्पिरहन्थे । उनको सुपरस्टारडम भने धेरै लामो समय सम्म टिक्न सकेनन् । तर उनलाई दर्शकहरूले छोटो समयमै एकदमै रुचाए । उनलाई लिएर जो पागलपन थियो,त्यस्तो सायद हिन्दी फिल्ममा कुनै पनि अभिनेताको भाग्यमा रहेको थिएन ।सेतो कार चुमेर रङ्गिन बनाउँथे देखि एक झलक पाउनका लागि तड्पीन्थे युवतीहरू, यस्तो छन् उनका किस्सा । बिहीबार राजेश खन्नाको पुण्य…
बलियुड का यी ४ कलाकारहरुको साइड बिजनेस सुन्दा परिन्छ चकित पुरा हेर्नुहोस !
एजेन्सी :बलियुड का ४ यी कलाकारहरुको साइड बिजनेस सुन्दा परिन्छ चकित हेर्नुहोस: बलियुड चलचित्र क्षेत्र मा केहि बलियुड कलाकार हरुपनि छन् जसले बलियुड मा मात्र नभएर आफ्नो साइड बिजनेस मा पनि धमाका मच्चाएका छन् ! हलियुड बलियुड मा साइड बिजनेस गर्ने कलाकार हरु कमै मात्रा मा भेटिन्छन तर केहि कलाकार हरुले भने बलियुड मा मात्र नभएर आफ्नो साइड बिजनेस मा पनि सफलता पाएका छन् ! ति मध्यका केहि बलियुड कलाकार हरु हुन् सुनिल सेट्टी , मिथुन चक्रबती , अक्ष्य कुमार ,करिस्मा कपुर् हेर्नुहोस यी बलियुड कलाकार को साइड बिजनेस यसप्रकार छ…
फिल्म ‘कबिर सिंह’ पछी शाहिदको पारिश्रमिकः ३ करोड बाट पुग्यो यती धेरै…
काठमाडौँ असार २९ । यसै वर्षको बलिउड ब्लकबष्टर फिल्म हो ‘कबिर सिंह’ । यही चलचित्रका कारण उनी अहिले चर्चाको शिखरमा रहेका छन् । यो चलचित्रलाई अभिनेता शाहिद कपुरको करियरकै सबै भन्दा ठुलो सफलताको रूपमा लिइएको छ । अभिनेता शाहिद कपुरले यही फिल्मको सफलता सँगै आफ्नो पारिश्रमिक दर पनि बढाएका छन् । हालै एक समाचारमा जनाए अनुसार अभिनेता शाहिदले आफूले लिँदै आएको ३ करोड भारु बाट बढाएर ३० करोड भारु पुर्‍याएको बताइएको छ । त्यसो त कबिर सिंहलाई शाहिदको पहिलो सोलो हिट फिल्म समेत मानिएको छ । यो फिल्मले सोच भन्दा…
बाहुबलीकी आमा शिवगामीको कती छ त सम्पत्ती?
एजेन्सी । चलचित्र बाहुवली बाट शिवगामीको नामले धेरै चिनिने दक्षिण भारतीय चलचित्रकी चर्चित अभिनेत्री हुन राम्या कृष्नन सेन । राम्याले पछिल्लो समय बलिउड चलचित्रहरूमा पनि अभिनय गरिसकेकी छिन् । उनको जन्म १९७० सेप्टेम्बर १५ तारिखमा तामिलनाडुमा भएको थियो । राम्याको पतिको नाम पशुपलेटी हो । उमेरले ४९ वर्षकी भएनी दक्षिण भारतीय चलचित्र क्षेत्रमा उनको डिमाण्ड निकै बढ्दो छ । चलचित्र बाहुवलीमा राम्या बाहुबलीकी आमा शिवगामीको पात्रमा रहेकी थिइन् । उनले अभिनय गरेको उक्त चलचित्र सुपर हिट भएको थियो भने उनको चौतर्फी तारिफ समेत भएको थियो । उनले बाहुबली फिल्ममा बाहुबलीको आमा…
बलिउड किंग शाहरूखकी श्रीमती भएपनी यस्तो जीवन बिताउँदै छिन् पत्नी गौरी
काठमाडौँ । भारतीय चलचित्र क्षेत्रका निकै चर्चित अभिनेता शाहरूख खान लाई बलिउड किंग खानको रूपमा चिनिने गरिन्छ । शाहरूख कि श्रीमती गौरी खान बेला बेलामा मिडियामा छाएकी हुन्छिन् । पछिल्लो समय गौरीले आफ्नो श्रीमान् शाहरूख खानको सम्बन्धको बारेमा केही नयाँ खुलासा गरेकी छिन् । उक्त कुराले मिडियाहरूमा निकै चर्चा भइरहेको छ । गौरी एक किताब सार्वजनिक कार्यक्रममा पुगेको बेला उनले केही सञ्चारमाध्यमहरू सँग कुराकानी गर्दै शाहरूख एक असल पति र पिता भएको बताइन । उनले शाहरूखको श्रीमती हुनु आफ्नो लागी निकै सकारात्मक कुरा भएको समेत बताएकी थिइन् ।तर, आफूले सधैं…